‘बाढी र डुबानको दिर्घकालीन समाधान खोजौं’ «
‘बाढी र डुबानको दिर्घकालीन समाधान खोजौं’
प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तराईमा वर्षेनी आउने बाढीको समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक तवरमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति देउवाले भारतसँग कूटनीतिक तवरमा छलफल गरेर बाढीको समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“भारतले नेपाललाई दोष दिने, नेपालले भारतलाई दोष दिने काम हुँदै आएको छ । एकले अर्कालाई दोष दिएर कति दिनसम्म पुग्छ ? यसमा भारतसँग कूटनीतिक तवरमा कुरा गरेर सधैंका लागि समाधान गर्नुपर्छ । स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने समय आइसकेको छ,” उनले भने ।
सभापति देउवाले बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत, उद्धार गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको भएको स्मरण गराउँदै तराई–मधेसका बाढीपीडितलाई राज्य पक्षले कुनै पनि सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । “घरबारविहिनलाई बास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा दिने पहिलो कर्तव्य सरकारको हो । तर, बाढीपीडितले केही पाएका छैनन् । रेडक्रस र एनजीओहरुले केही सहयोग गरेका छन् । यो सरकारले केही दिएको छैन,” उनले भने ।
बाढी प्रभावित जिल्लाका भ्रमणका क्रममा आफूले जनता दुःखमा परेका बेला स्थानीय सरकार पनि बाढी प्रभावितसम्म पुगेको नदेखेको उनले संसदमा सुनाए । “जनता दुःखमा परेका छन् । स्थानीय सरकार पनि पुगेको छैन । राज्य भनेको दुखमा परेका बेला पुग्ने होइन ? पानी सुक्ला र घर जाउँला भनेर जनता पर्खेर बसेका छन्,” सभापति देउवाले भने ।
उनले हेलिकप्टरमा चढेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरिएको प्रति पनि सरकारको आलोचना गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले बाढीपहिरोको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समस्या आएपछि मात्र समाधान खोज्नेभन्दा पनि बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपत् व्यावस्थापसम्वन्धी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद प्रभु शाहले तराई र पहाडका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण पीडित घरवार विहीनलाई कम्तीमा स्थायी टहराको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद ईन्दुकुमारी शर्माले प्रदेश नं–२ मा चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण बाढी र डुबान झन झन बढ्दै गएको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि समर्थन गरिन् ।
सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले पूर्व तयारी नभएका कारण कुलेश्वर र बल्खुलागतय काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र डुबानबाट ठूलो क्षति भएको हुँदा आगामी दिनमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा लगाइएको बाँध र तटबन्धका कारण तराई क्षेत्र डुबानमा परेको भन्दै समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमानामा बाँध निर्माण गरेका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको उनले बताए । “भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासविपरीत नेपालको सीमानामा पाँच दर्जनभन्दा बढी बाँध र तटबन्ध बनाएका कारण वर्षेनी नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्ने र जनधनको क्षति भइरहेको छ,” उनले भने । सन् १९९९ मा नेपाल–भारतबीच भएको एक सम्झौताअनुसार सीमा क्षेत्रबाट आठ किलोमिटर उत्तर–दक्षिण कुनै पनि पक्की संरचना निर्माण गर्न नपाइने प्रावधान रहेको पनि उनले बताए ।
सांसद सरिता गिरीले जलस्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन शहरी बसोवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रस्तावको समर्थन गरिन् । सांसद शिवकुमार मण्डलले नदी नियन्त्रणको विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए ।